Maalinta Xuquuqlinsaanka oo magaalada Muqdisho si wweyn looga xusay | Somalisan.com Home
Maalinta Xuquuqlinsaanka oo magaalada Muqdisho si wweyn looga xusay 12/10/2012 5:02:00 Isu imaadka lagu xusayay maalinta xuquuqda aadanaha waxaa isku soo duway Midowga Yurub waxaa ka qeyb-galay madax ka socotay dowladda Soomaaliya, iyo mas’uuliyiin ka tirsan Qaramada Midoobay iyo sidoo kale dadka kale oo lagu marti sooray. Maalinta Xuquuqda Aadanaha iyadoo munaasabad arintaasi lagu xusayay lagu qabtay hoolka shirarka ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulle Cusmaan. Isu imaadka lagu xusayay maalinta xuquuqda aadanaha waxaa isku soo duway Midowga Yurub waxaa ka qeyb-galay madax ka socotay dowladda Soomaaliya, iyo mas’uuliyiin ka tirsan Qaramada Midoobay iyo sidoo kale dadka kale oo lagu marti sooray. Mas’uuliyiinta dhanka Dowlada uga qeybgashay munaasabadaasi waxaa ka mid ahaa Wasiirka warfaafinta Soomaaliya C/llaahi Ciil-mooge Xirsi kaasoo xafalada ka sheegay in Dowladu ka xuntahay tacaddiyada ka dhanka ah weriyeyaasha Soomaaliyeed kuwaasoo sanadkaani kaliya laga dilay ilaa 18 saxafi. Dowlada ayuu wasiirku sheegay inay san sidaa ku eegan doonin tacadiyada saxaafada ka dhanka ah islamarkaana ay dowladu wax ka qaban doonto iyadoo la socon doonta hadaba talaabadii ay ka qaadan karto si ay uga hortagto tacadiyadaasi. Sanad kasta waxaa la xusaa 10-ka December taasoo qaramada midoobe ay u asteysay maalinta xuquuda aadanaha iyadoo la ogyahay in dunida in badan ay ka socdaan tacadiyada xuuuqda aadanaha gaar ahan reer galbeedka iyo afrika.
Xusuaska Noocaan oo kale ah ayaa waxaa soo qabanqaabiya ururo xiriir dhwo la leh UN ka kuwaas oo marka danbana asheega in ay ku baxday malaayiin doolar si ay macaash uga helaan Warar kale oo xiiso leh halkaan ka aqriso. tweet FG: Shabakada Wararka ee Somalisan Mas'uul kama ahan Cidii ku xadgudubto Shaqsi Raalina kama noqonayso Somalisan.com. Fikirkaaga hoos kadhiibo: